အရှေ့အာရှက ကမ္ဘာကျော် ရာကူဇာဂိုဏ်း ရဲ့ အကြောင်း - Thutazone
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အကျော်ကြားဆုံး လူဆိုးဂိုဏ်းဆိုရင် မာဖီးယားဆိုတာ သိကြပြီးဖြစ်သလို အာရှက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရာကူဇာဂိုဏ်းနာမည်ကိုလည်း ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ကမ်းကုန်အောင်မိုက်ရူးရဲဆန်ဆန် ပြုမှုနေတဲ့ရာဇဝင် လူမိုက်အစုအဝေးကို မြင်တွေ့ရပါက သူတို့တွေဟာ ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတွေလို့ပဲ ထင်တတ်ကြပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ယနေ့အချိန်မှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး အုပ်စုဖွဲ့ရမ်းကားတိုက်ခိုက်တဲ့ အပြုအမူဆိုတာ မရှိသလောက်နည်းပါးသွားပြီဖြစ်ပေမယ့် တချိန်ကတော့ ရာကူဇာဂိုဏ်းဟာ အလွန်ဆိုးရွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ယာကူဇာတွေဟာ ယခုအချိန်မှာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မရှိတော့ပေမယ့် မြေအောက်ဂိုဏ်းတစ်ခု အဖြစ်ရပ်တည်နေကြဆဲဖြစ်ပြီး အီတလီမှာရှိတဲ့ မာဖီးယားဂိုဏ်း အပါအဝင်အခြားဂိုဏ်းတွေနဲ့ မတူညီတဲ့အချက်ကတော့ ယာကူဇာတွေဟာ ဂျပန်လူမျိုး တွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာတွေကို တန်ဖိုးထားစောင့်ရှောက်ကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်း အီရီဇူမီ လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်ရိုးရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ တက်တူးများစွာရှိနေကြပြီး သူတို့ရဲ့တက်တူးပုံစံတွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက တက်တူးဝါသနာရှင်တွေအကြား အလွန်ရေပန်းစားပါတယ်။ ယာကူဇာတွေဟာအုပ်စုလိုက် လှုပ်ရှားကြလေ့ရှိပြီး ဂိုဏ်းသားတိုင်းဟာ လူသတ်ဖို့ အလွန်ပဲ လက်ယဉ်ကြပါတယ်။ ယာကူဇာ ဂိုဏ်းသားတွေဟာ အပြစ်တစ်ခုကို ကျူးလွန်မိပါက မိမိရဲ့လက်ချောင်းတွေကို ဓါးနဲ့ ခုတ်ဖြတ်ခြင်းအပါအဝင် လူမဆန်တဲ့ မျိုးဆက်ကုန်အောင်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ကိုလည်းပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဖော်ပြကြတဲ့ ယာကူဇာတွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကြောင်းတွေထက် အပြင်က ယာကူဇာတွေရဲ့ဘဝဟာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး လက်တွေ့ဆန်ပါတယ်။ ယာကူဇာတွေဟာ ပြည်သူတွေကြားမှာပဲ ပုံမှန် လှုပ်ရှားလေ့ရှိနေပြီး သူတို့တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် သက်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းတွေရှိကြပါတယ်။ လိုအပ်ချိန်ရောက်မှသာ လျို့ဝှက်ပေါင်းစပ်ကြပြီး ဂိုဏ်းခေါင်း ဆောင်တွေက ချပြတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေအပိုင်းအခြားအလိုက်(သို့) စုပေါင်းပြီး အကောင်အထည်ဖော်ကြပါတယ်။
ယာကူဇာတွေဟာ အင်အားအလွန်ကြီးမားတဲ့ ကွန်ယက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဒုစရိုက် လုပ်ငန်းတွေအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းတွေကို အခကြေးငွေနဲ့ဖြစ်စေ၊ဂိုဏ်းရဲ့ ရပ်တည်ချက်သဘောထားအရဖြစ်စေ ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်အောင် ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ယာကူဇာတွေဟာ အာရှတိုက်အရှေပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ အများအားဖြင့် အခြေချနေထိုင်လေ့ရှိကြပြီး အမေရိကန်အပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံတွေ မှာလည်း ရှိကြပါတယ်။ ယာကူဇာတွေဟာ အနေအထိုင်သိုသိုသိပ်သိပ် နေထိုင်လေ့ရှိ ကြပြီး ယာကူဇာတွေရဲ့ ဂိုဏ်းစည်းမျဉ်းတွေ၊လှုပ်ရှားပုံတွေ၊တာဝန်ခွဲဝေပြီး အပိုင်းအခြား အလိုက်လှုပ်ရှားပုံတွေကိုတော့ ယနေ့အချိန်ထိ အသေးစိတ်သိရှိသူ အလွန်နည်းပါး ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာမျှဝေပေးချင်တာကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမြေအောက်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွေထဲမှာ အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီး၊ လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခု ဖြစ်ပေမဲ့ သမိုင်း အဆက်ဆက် ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ယာကူဇာဂိုဏ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ အချို့ဖြစ် ပါတယ်။
လူအများစုက ယာကူဇာတွေဟာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဆီး တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဥပဒေ မဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့ ဂိုဏ်းတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ကြပေမဲ့ စစ်ဒဏ်ကြောင့် ထောင်းလမောင်းကြေနေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို ပြန်လည်ထူထောင်တဲ့ဖြစ်စဉ်၊ သဘာဝဘေး အန ္တရာယ်ကျရောက်လို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ယာကူဇာဂိုဏ်းဟာ အဓိကနေရာကနေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင် ကမ္ဘာကျော် ဆူမိုနပန်းသမားတွေနဲ့ ယာကူဇာဂိုဏ်းအကြားမှာလည်း ဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့အချိန်ထိ ယာကူဇာတွေဟာ ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့တယ် ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ အများစုကတော့ ယာကူဇာတွေဟာ အလယ် အီဒို(ဂျပန်နှစ်)ကာလ (၁၆၀၃-၁၈၆၃)ကာလကတည်းကရှိနေ ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အတန်းအစား နှစ်ရပ်ကနေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ပထမတစ်ခု ကတော့ Tekiya လို့သိကြတဲ့ ဥပဒေအရတားမြစ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံပို့ဆောင်တဲ့ မြေအောက်ဂိုဏ်းနဲ့ စွန့်ပစ်ထားတဲ့ အဝတ်အထည်တွေ ဆီကနေသိုးမွှေချည်မျှင်တွေ လိုက်လံယူဆောင်ပြီး ခိုးမှုကျူးလွန်လေ့ရှိတဲ့ ဂိုဏ်းတွေကနေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြ ပါတယ်။ ဒုတိယအတန်းအစားကတော့ Bakuto လို့သိကြတဲ့ နယ်လှည့်ပြီးလောင်းကစား အမှုတွေပြုလုပ်ကြတဲ့ ဂိုဏ်းတွေကနေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်။
ယနေ့အချိန်ထိ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ယာကူဇာဂိုဏ်းသား (၅၈၀၀၀)လောက်ရှိနေပြီး ကမ္ဘာတစ် ဝှမ်းလုံးက ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတွေကို ထည့်သွင်းရေတွက်ပါက အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း (၁၀၂၀၀၀)ဦးရေအထိ ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ ယာကူဇာဂိုဏ်းမှာ အဓိကအဖွဲ့(၃)ခုရှိပြီး Yamaguchi- gumi အဖွဲ့ဟာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်(၅၅၀၀၀)လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီလူဦးရေကို နယ်မြေအလိုက် အဖွဲ့ငယ် (၈၅၀)လောက်ဖွဲ့စည်းပြီး အရေးကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ Yamaguchi-gumi အဖွဲ့ဟာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေအထိတောင် ဂိုဏ်းသားတွေတည်ရှိပြီး အကြမ်းဖက်ကိစ္စတွေ ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ အစိုးရက အဲဒီအဖွဲ့ ကို ပစ်မှတ်ထားနှိမ်နင်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မီဒီယာတွေကတော့ ယာကူဇာတွေကို ဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ Boryokudan လို့ခေါ်ပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့လူစုလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ယာကူဇာတွေကတော့ သူတို့ကို သူတို့ ဂျပန်လို ninkyo dantai လို့ခေါ်ဆိုပြီး အလယ်ခေတ်သူရဲကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာက်ရှိတဲ့သူ တွေလို့အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။
ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတွေထဲမှာ လှပတဲ့အမျိုးသမီးအချို့လည်း ပါဝင်နေခဲ့ပြီး ဂျပန်လို တော့ Ane san ၊ အမကြီးများလို့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်းအနေနဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဂျပန်ဆူမို နပန်းသမားကြီးတွေနဲ့ ယာကူဇာဂိုဏ်း ဟာဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေခဲ့ပြီး ဆူမိုနပန်းသမားကြီးတွေဟာ ပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်မှု များလာပါ က မိမိကိုယ်ကို ယာကူဇာတွေရဲ့ နည်းအတိုင်းပြန်လည် အပြစ်ပေးလေ့ရှိပြီး ဆူမိုတွေ ဟာ နပန်းလောက ကနေအနားယူသွားတဲ့အခါ ယာကူဇာဂိုဏ်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ်။
ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အပြည့်ထိုးထားတဲ့ တက်တူးတွေ ကြောင့်လည်း နာမည်ကျော်ပါတယ်။ ဒီတက်တူးတွေကိုတော့ ဂျပန်မှာ Irezumiလို့ သိကြပြီး ဒီတက်တူးတွေကိုထိုးရာမှာ ခေတ်မီအသုံးအဆောင် လျှပ်စစ်ကိရိယာတွေ ကိုအသုံးမပြုရပဲ ဝါး(သို့)စတီးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ စုပ်တံကိုအသုံပြုပြီး အရေပြားမှာထိုးကြ ရပါတယ်။ ယာကူဇာတွေရဲ့ တက်တူးထိုးနည်းဟာ အလွန်ဈေးကြီးပြီး ကာယကံရှင် အနေနဲ့လည်း အလွန်နာကျင်စွာခံစားရပါတယ်။ ဒါအပြင် ယာကူဇာတွေရဲ့ တက်တူးတွေ ကို နှစ်နဲ့ချီပြီးကြာအောင်ထိုးရလေ့ရှိပါတယ်။
ယာကူဇာတွေဟာ အမေရိကန်မှာလည်း အခြေချနေထိုင်ကြပြီး အထူးသဖြင့် Los Angeles. San Franciso. Arizoina.Virginia.Chicago. New York မြို့တွေမှာ အများအားဖြင့် နေထိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယာကူဇာတွေရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းတွေကို တော့ ဟာဝိုင်အီမှာပဲ ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အကြား တရားမဝင် ဘိန်းဖြူ နဲ့လက်နက် မှောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ပါတယ်။
ယာကူဇာဂိုဏ်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးလောက အတွင်းမှာ တောင်အခြေချ နေခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးအချို့နဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူး အထိရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အချို့ဟာ ယာကူဇာဂိုဏ်းနဲ့ ပတ်သတ်မှု ရှိခဲ့တယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
ယာကူဇာဂိုဏ်းရဲ့ ဓလေ့တွေမှာ ထူးခြားတဲ့လုပ်ရပ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ဥပမာ အနေ နဲ့ပြောရရင်တော့ Yubitsume ဆိုတဲ့ အလေ့အထဖြစ်ပြီး အပြစ်ဒဏ်သင့်တဲ့ ဂိုဏ်းသားဟာ မိမိရဲ့လက်သန်းကို ဓါးနဲ့လှီးဖြတ်ပြီး မိမိရဲ့အပြစ်ကို ပေးလျော်ရတာပါ။ ဒီအလေ့ဟာ ရှေးခေတ်ဂျပန်ဓါးသိုင်း သမားတွေရဲ့ရိုးရာ ဖြစ်ပြီး လက်သန်းအဖြတ်ခံခဲ့ ရတဲ့ဂိုဏ်းသားဟာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကျဆင်းသွားပြီး အားနည်းတဲ့သူအဖြစ် အခြားဂိုဏ်းသားတွေကယူဆကာ ဝိုင်းဝန်း စောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးတဲ့ကာလမှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံက ယာကူဇာဂိုဏ်းသား အရေအတွက်ဟာ အလွန်များလာခဲ့ပြီး (၁၈၄၀၀၀) ဦးအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင် အမေရိကန်စစ်သည်တွေ ဂျပန်နိုင်ငံကို ခေတ္တသိမ်းပိုက်ထားစဉ်ကာလတွေ တုန်းကလည်း ယာကူဇာတွေဟာ အစိုးရရဲ့အမိန့်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး ပြန်လည်တိုက်ခိုက် ခဲ့ပါသေးတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတော့ ယာကူဇာဂိုဏ်း ရဲ့Yamaguchi-gumi အဖွဲ့ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၀ဘီလျံလောက် ချမ်းသာကြွယ်ဝ ပြီး အဲဒီပမာဏဟာ ယာကူဇာဂိုဏ်းကို ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးသော ဂိုဏ်းအဖြစ်ရပ်တည် စေပါတယ်။
(၂၀၁၃)ခုနှစ်မှာတော့ ယာကူဇာဂိုဏ်းဟာ Yamaguchi-gumi Shinpo အမည်ရတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဒီမဂ္ဂဇင်းမှာတော့ ဂျပန်လို Haikuလို့အမည်ရတဲ့ အသံ(၁၇)သံပါရှိပြီး အပိုင်း(၃)ပိုင်းရှိတဲ့ ဂျပန်ကဗျာ၊ ငါးဖမ်းနည်းဆိုင်ရာ အထောက် အကူပြု ပစ္စည်းတွေ အကြောင်းနဲ့ စာဖတ်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိစေတဲ့စာစုတွေ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Yamaguchi-gumiတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေကို သိသိသာသာ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေတွေကို ထိပါးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ ပါဝင်လာတာကြောင့် စာပေထုတ်ဝေ ခွင့်ကိုပြန်လည်ရုတ်သိမ်း ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ယာကူဇာတွေကို အချို့သော ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက မိမိရဲ့ပြိုင်ဘက် လုပ်ငန်းရှင်ကို စီးပွားရေးကျဆင်း သွားစေရန်ဆောင်ရွက်တဲ့ အခါမှာ လက်ကိုင်တုတ် အနေနဲ့ အသုံးပြုပါတယ်။ ဂျပန်လို Sokaiya လို့ခေါ်တဲ့ဒီလုပ်ရပ်ဟာ အရပ်ဘက်သာမန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေ စကော့ရှယ်ယာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအထိ ယာကူဇာတွေရဲ့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အနှောင့်ယှက်ပေးမှုကို ခံရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံက လုပ်ငန်းရှင် တော်တော်များများဟာ ယာကူဇာတွေနဲ့ အမြဲပတ်သက်နေခဲ့ရပြီး ယာကူဇာဂိုဏ်းရဲ့ ဝင်ငွေအများစုဟာ ကုမ္ပဏီတွေကို အကျိုးတော်ဆောင်ခ အဖြစ်ရရှိနေတာပါ။
ယာကူဇာဂိုဏ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှတ်တမ်းတစ်ခုကတော့ ၂၀၁၁က Tohoko နဲ့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က Kobe မြို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်နဲ့ ဆူနာမီဘေးဒဏ်ကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်ပြည်သူတွေ ကို တက်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ ပါဝင်ကူညီခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဒေသတွေ အတွက် အစားအသောက်၊ဆေးဝါး၊သောက်ရေတို့ကို ယာကူဇာဂိုဏ်းရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေတွေထဲက နေကုန်ကျစေခဲ့ပြီး ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတွေကိုယ်တိုင် ဒုက္ခသည်တွေထဲ စိမ့်ဝင်ကာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို အင်တိုက်၊အားတိုက်လုပ်ဆောင် ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံက နာမည်ကျော်ကလေးကစားစရာအရုပ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကတော့ Bob လို့အမည်ရတဲ့ ဈေးကွက်မှာအရောင်းလိုက်တဲ့ ကလေးကစား စရာအရုပ်မှာ လက်ချောင်းလေးချောင်းသာထည့်သွင်း ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် တော့ ဂျပန်လူအဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှာ ယာကူဇာတွေက အလွန်သက်ရောက်မှုရှိနေ တာကြောင့် ကလေးငယ်တွေကို ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတွေ မဟုတ်ကြောင်းသိစေလို တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ထူးခြားမှုကတော့ ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတွေရဲ့ အရေပြားမှာထိုးထားတဲ့ အလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ တက်တူးတွေကို ပြခန်းမှာပြသပြီး ရောင်းချတဲ့ အလေ့ပါ။ မှောင်ခို ဈေးတွေမှာ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို တွေ့မြင်ရလေ့ရှိပြီး အရှက်လုံသာ ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားမဲ့ အနေအထားနဲ့ တက်တူးတွေကို ခင်းကျင်းပြသနေတဲ့ ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတွေကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။
ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ရင်တော့ အရင်ဆုံးရေးဖြေစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ရမှာပါ။ ဖြေရမဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လိုသူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ရည်ရွယ်ချက်၊ မျိုးချစ်စိတ်ပြည့်ဝမှု၊ယာကူဇာဂိုဏ်းရဲ့ သမိုင်းစဉ်ဆက် အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယာကူဇာဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတော့ Ya Ku Za ဆိုပြီး အပိုင်း(၃)ပိုင်းခွဲ နိုင်ပြီး ဂျပန်ရိုးရာကိန်းဂဏန်းတွေအရ ၈-၉-၃ ဆိုတဲ့သဘော သက်ရောက်ပြီး ဒီဂဏန်းစဉ်တွေ ဟာ ဂျပန်ဖဲကစားနည်းဖြစ်တဲ့ Oicho-Kabu မှာအလွန်ဆိုးရွားတဲ့ နံပါတ်တွဲတွေ အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ Katana လို့အမည်ရတဲ့ ဂျပန်ရိုးရာဓါးရှည်တွေဟာ ဆာမူရိုင်းသူရဲကောင်းတွေ ကိုင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လက်နက်တွေဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်ထိ ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတွေ ဆက်လက် အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
အဲဒီဓါးတွေကိုတော့ လူတွေကိုသတ်ဖြတ်တဲ့ နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီး ထင်ရှားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကတော့ ၁၉၉၄ခုနှစ်က ဖူဂျီရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီက ဒုတိယ ဥက္ကဌ Juntaro Suzuki ကို Katana ဓါး ရှည်နဲ့ ယာကူဇာဂိုဏ်းက သတ်ဖြက်ခဲ့တာပါ။ အကြောင်းရင်းကတော့ ယာကူဇာ အဖွဲ့ရဲ့ တန်စိုးလက်ဆောင်ပေးအပ်တာကို ငြင်းဆန်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ယာကူဇာဂိုဏ်းရဲ့ အဖွဲ့ဝင်အသစ်ဖြစ်လာသူဟာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အခမ်းအနားနဲ့ sake လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်အရက်ကို ဂိုဏ်းရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီ သောက်သုံးရပါတယ်။ဂျပန်လို Sakazukigoto လို့လူသိများကြပြီး အဖွဲ့ဝင်အသစ်ဟာ Oyabun (ဖခင်)လို့ခေါ်တဲ့ သူရဲ့လက်ဦးဆရာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားမှာထိုင်ပြီး သောက်သုံးရတာပါ။ ယာကူဇာဂိုဏ်းရဲ့ အဖွဲ့ဝင်သစ်ဟာ အလွန်နည်းတဲ့ အရက်ပမာဏကိုသာ သောက်သုံး ရပြီး သူရဲ့လက်ဦးဆရာကတော့ ဖန်ခွက်နှုတ်ခမ်းအပြည့် အရက်ထည့်ထားတဲ့ခွက်ကို သောက်သုံးပါတယ်။ ဒါဟာ ယာကူဇာဂိုဏ်းရဲ့ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် လေးစားမှုသဘော တရားကို ပြသပါတယ်။
ယာကူဇာ ဂိုဏ်းသားအချင်းချင်းမှာ အဓိကအငြင်းပွားနေတဲ့ ပြသနာကတော့ အစိုးရ ကတရားဝင်တားမြစ်ထားတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို ကူးသန်းရောင်းဝယ်နေတဲ့ ပြသာနာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယာကူဇာရဲ့ အဓိကအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Yamaguchi-gumi ဂိုဏ်းသား တွေက အဓိကလုပ်ဆောင်နေတဲ့ လက်နက်နဲ့ ဘိန်းဖြူ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းကို ရှေးရိုးစွဲ ပြည်တွင်းယာကူဇာတွေက ဒီလိုပြုလုပ်နေခြင်းဟာ တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ထောက်ပြပြီး သဘောထားကွဲလွဲကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဆာမူရိုင်းသူရဲ ကောင်းတွေရဲ့ အမွေကိုဆက်ခံသူ အနေနဲ့ပုံဖမ်းကြပါတယ်။ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ရဲ့ပေးဆပ်ခြင်း၊အနစ်နာခံခြင်း၊နောက်ဆုံး အသက်သေခံခြင်းဖြင့် မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်း ကိုသစ္စာခံ ကြပါတယ်။ အဲဒီစရိုက်ဟာ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ မူလစရိုက်ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဒီနေရာမှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ဂျပန်တွေရဲ့ သံမဏိစိတ်ဓာတ်ကို ဖော်ကျူးရာ ရောက်ပြီး မိရိုးဖလာယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ကို ထိန်းသိမ်းရာလည်း ရောက်တယ် လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။